Benjamin Howdeshell သည် Milla Jovovich ကို“ Withwithwithwith” ဟုထိတ်လန့်စွာဖြင့်ညွှန်ကြားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Howdeshell ထိတ်လန့ "Withorwithout" တွင် Milla Jovovich ညွှန်ကြား
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Howdeshell ထိတ်လန့ "Withorwithout" တွင် Milla Jovovich ညွှန်ကြား
တစ်ဦးကဘုံ Thread ၏ Howdeshell, တစ်ချက်ချင်း macabre ဂန္ကြောင်းတီးဝိုင်းကှကျအတှကျအတိုတောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဖန်တီးပေးပါတယ်။
Los Angeles-Director ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Howdeshell အတွက်အမှောင်ခြမ်းမိမိကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာပြသ Withorwithoutသည်အတွက်နေအိမ်ကျူးကျော်များ၏သရုပ်သားကောင်များနေသောစုံတွဲတစ်တွဲအကြောင်းကိုသည်သူ၏သစ်ကိုထိတ်လန့်ရုပ်ရှင် / ဂီတဗီဒီယို ဟောလိဝုဒ် တောင်ကုန်း။ သြစတြေးလျတီးဝိုင်းကှကျအားဖြင့်နာမည်တူ၏သီချင်းကိုမှ Set, ရုပ်ရှင်တစ် Delicious ပဋိသန္ဓေ ယူ. ဗိုလ်လုပွဲလှည့်ကွက်ပို့ဆောင်မတိုင်မီညှာအတာမဲ့တင်းမာမှုတက် ratchets တဲ့ပုံပြင်ထဲမှာ Milla Jovovich သရုပ်ဆောင်။
Jovovich သူတို့တီးဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များကကစားမျက်နှာဖုံး, လက်နက်-ရှည်များကိုင်ဆောင်ထားတို့, အုပ်စုတစုအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ကြသောအခါသူမ၏ခင်ပွန်း (Carsten Norgaard) နဲ့ TV ကိုစောင့်ကြည့်အိပ်ရာအတွက်မယ့်သူတစ်ဦးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်သည်။ စုံတွဲသူတို့ကိုယ်သူတို့ဘဝများအတွက်ပြင်းထန်သောရုန်းကန်အတွက်ဖမ်းမိတွေ့အဖြစ်အခြေအနေကအလျင်အမြန်ကိုအရှိန်။ Howdeshell တီးဝိုင်းအားဖြင့်ချိုမြိန်, Soul သီချင်းနှင့်အတူဆနျ့ကငျြဘမှတဆင့်အပေါငျးတို့သ creepier ကို လုပ်. , တီထွင်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်ကြောက်စရာအချိန်လေးစာရေးနှင့်အတူပုံပြင် punctuates ။
"ငါသည်လမ်းကြောင်း၏ Melancholie ဒစ္စကို groove ဆန့်ကျင်သောဤစိတ်ပျက်ဖွယ်ပုံရိပ်တွေဖေါ်ပြခြင်း၏စိတ်ကူးကိုခစျြ" Howdeshell ကပြောပါတယ်။ "အဲဒီအလုပ်လုပ်ဖို့အဓိကကျနော်တို့ဂီတစတင်မတိုင်မီကစားမယ့်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကြော်ငြာတိုကိုပြုကြသောတက်ရှေ့တင်းမာမှုတည်ထောင်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သောအပိုင်းအစ၏သေံသတ်မှတ်။ "
[wpdevart_youtube width =” 640″ height =” 385″ autoplay =” 0″ theme =” dark” loop_video =” 0″ enable_fullscreen =” 1″ show_related =” 1″ show_popup =” 0″ thumb_popup_width =” 213″ thumb_popup_height =” 128″ show_title = "1″ show_youtube_icon =" 0″ show_annotations = "1″ show_progress_bar_color =" red "autohide_parameters =" 1″ set_initial_volume = "false" initial_volume = "100″ disable_keyboard =" 0″] JUelBEuz [JUelBEd]
တစ်ဦးကဘုံ Thread မှတဆင့်ညွှန်ကြားတဲ့သူ Howdeshell, မိမိအ Self-အမည်ရှိ Howdeshell ရုပ်ရှင်မှတဆင့်ရေတိုရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအယူအဆကှကျကနေသညျ လာ. ခဲ့ထုတ်လုပ်အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် Jovovich, ဒါရိုက်တာနှင့်တီးဝိုင်းတစ်ခု ardent ပန်ကာတစ်ခုသက်တမ်းကြာမိတ်ဆွေတစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ script ကို Howdeshell ရဲ့မကြာခဏပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ, သူ Mike ဒိုကရေးသားခဲ့သည်။
ထုတ်လုပ်မှုတည်နေရာနေဝင်ချိန် Boulevard အတွက်အထက်တောင်ကုန်းများတွင်တည်ရှိပြီးတစ်ဦးဂန္ 1960s စပျစ်သီးကိုအိမ်ပြန်ခဲ့ Los Angeles မြို့။ "Milla နှင့်အလုပ်လုပ်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်," Howdeshell ကပြောပါတယ်။ "သူမဟာပြင်းထန်မှုကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံ, သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လောက်, ကင်မရာကစားရန်မည်သို့နားလည်သည်။ ကျနော်တို့ကိုကွောကျရှံ့ရှိကြ၏။ ညဉ့်အဆုံးမှာမော်နီတာပေါ်တွင်နောကျဆုံးမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကြည့်နေတဲ့စစ်မှန်တဲ့ '' ဘုရားကိုငါ့အိုး '' အခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ "
Howdeshell ရဲ့ယခင်ခရက်ဒစ်ဆုရတိုတောင်းပါဝင်သည် Project မှ: SERA, ပေးသောသူနောက်ထပ် IGN နှင့် 20 များအတွက်စီးရီးသို့တီထွင်th Century Fox ။ သူလည်း HP က, Anheuser-Busch, Budweiser, Bacardi နှင့် Doritos အဘို့ကြော်ငြာညွှန်ကြားခဲ့သည်။ လောလောဆယ်သူ 20 များအတွက်မူရင်းအတိုရုပ်ရှင် directing ရဲ့th Ridley Scott ၏နောက်ဆက်တွဲထဲမှာ set Century Fox, ဂြိုလ်သားအဆိုပါ 40 ၏အခမ်းအနားအတွက်th ရုပ်ရှင်သမိုင်း၏အထင်ကရအပိုင်းအစ၏နှစ်ပတ်လည်နေ့။ ယင်းမှဤသည်မှာတရားဝင်ပိတ်ဆို့, နောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင် ဂြိုလ်သား စကွဝဠာ 2019 အတွက်ဖြန့်ချိကြလိမ့်မည်။
တစ်ဦးကဘုံ Thread 4081 ရက်ဒ်ဝုရိပ်သာလမ်းမှာတည်ရှိပြီး, Los Angeles မြို့ကယ်လီဖိုးနီးယား 90066 ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, 310.823.7300 သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခေါ်ပါ www.acommonthread.tv
ဒါရိုက်တာများ သီချင်းဗီဒီယိုများ လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် 2018-11-30
ယခင်: အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံနောက်ထပ် Simplified ကင်မရာလိုင်း-Up ကို DSMC2 DRAGON-X ကိုအနက်နှင့်အတူနိဒါန်း
နောက်တစ်ခု: အဓိကဗြိတိန်ထုတ်လွှင့်မယ့်ဆိုဒ်များကိုဖြတ်ပြီးတပ်ဆင်ဘို့ရာခန့်ထားသောအားရှင်းလင်းရန်-Com ရဲ့ FreeSpeak II ကိုကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်